Update - Freeware - mp3DirectCut v2.19
Update - Freeware - TightVNC v2.7.1
Update - Freeware - Dictionary .NET v5.9
Update - Freeware - WinScan2PDF v2.04
Update - Freeware - RAMDisk v4.1.0. RC24
Auto Hide IP 5.3.4.2 For Pc 5MB
ဖုန်းအချင်း ဖိုင်ပို့သူတွေအတွက် bluetooth ထက် ၁၀-ဆလောက်မြန်တဲ့ zapya(Update) 6Mb
Audio File Recovery For Xp78 (4Mb) Direct Downlod
Internet Download Manager 6.15 Build9Final 5Mb Direct Downlod
Wise Care 365 Pro 2.42 Build 190 Final 8Mb
ရသစုံလင် Ecovision Business Jurnal CNN News The Sunday Time The New York Times MRTV3အင်တာနက်ဂျာနယ် ရန်ကုန်မီဒီယာ ရွှေအမြူတေ Myanmar Time for English Doyal-Myanmar First-11 Technical-Sevenfont Eleven Myanmar net ဈေးကွက်ဂျာနယ် မြန်မာအွန်လိုင်းစွယ်စုံကျမ်း သရဖူ ayeyarwaddylibrary Myanmar Ebook ကာတွန်းများ ဝိညာဉ်သစ်မြန်မာအွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက် Shwejokes Popular.cytroncom.. Burneseclassic Ebook မာယာမဂ္ဂဇင်း ပန်းစကား myanmarmp3.net မြန်မာဗီစီဒီများ petailasongs ရင်ခုန်သံ FM MMA မြန်မာရုပ်ရှင်သီချင်းများ မြန်မာသီချင်းကြီးများ ထူးအိမ်သင်သီချင်းများ နေ့သစ်မှသီချင်းများ ရွှေအိုး PLANET Free Myanmar VCD Shwe Dream Myanmar Image royathazin ခရမ်းပြာအိမ်မက် မေနှင်းအေး M.S.M Myanmar World ကိုရီးယားရုပ်ရှင် ကာရာအိုကေ မြန်မာရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုများ မြန်မာ-နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းများ အာရှနိုင်ငံများမှဇာတ်လမ်းများ နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းများ မင်းသီလမြန်မာရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုများ
စာအုပ်များ ကိုရန်နောင်ဦး အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန် မြန်မာဝတ္တုစာအုပ်များ တရားတော်များ စာအုပ်များ မြန်မာE-library Ebook များ
နည်းပညာဆိုက်ဒ်များ မာကို့စ် ကိုဇော် ကိုသံလုံးငယ် မောင်ပညာ ပုဂံသားမောင်ကျော် ကိုမြတ် ကိုရင်ပြည့်စုံ မောင်စေတနာ ကြယ်စင်မင်း သူရထွန်း ကိုရန်အောင် မိုးထက်မြင့် ဘုရင့်နောင်
ဂျာနယ်များ အလင်္ကာဂီတဂျာနယ် လျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ် ဈေးကွက်ဂျာနယ် ရန်ကုန်တိုင်းဂျာနယ် action ဂျာနယ် ပေါ်ပြူလာဂျာနယ် ဖတ်ပါသတင်းဂျာနယ် အခွင့်အလမ်းဂျာနယ် မြန်မာတိုင်း(မ်)ဂျာနယ် အင်တာနက်ဂျာနယ် Eleven ဂျာနယ်
တင်ဆက်သူ december boylay 1 Comment0Likes
တင်ဆက်သူ khinglin20110Comments2Likes
UB40- Kingston Town - YouTube
တင်ဆက်သူ soe naing 1 Comment0Likes
ရွှေမြန်မာဥယျာဉ် မနောရွှေစင်ပရဟိတအသင်း(ရန်ကုန်) မိုးတိမ်(ဥက္ကဌ) အလင်းငှက်(အတွင်းရေးမှူး) ကျော်ဇင်(တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး) နှင်းအေးလွင်(စာရင်းစစ်) အိပ်မက်မင်းသမီး(အသင်းဝင်) နူးညံ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်(အသင်းဝင်) လင်းလင်း(အသင်းဝင်) moemyintwai@gmail.com(အသင်းဝင်) ထိုက်ထိုက်ထွန်း(အသင်းဝင်) သက်စံ(အသင်းဝင်)
မီးလောင်ဗုံးသင့် ဒါဏ်ရာရ သံဃာတော်များသို့ ရွှေမြန်မာဥယျာဉ် မိသားစုမှ အလှူရှင်များ အာကာမိုးနိုင်+မသဇင်မာ = RM 100
ဒီဇင်ဘာဘွိုင်းလေး နှင့်ဇနီး = RM 50
ကိုဝင်းထွဋ်ဦး+မခိုင်ဇာအောင် = ၂၀၀၀၀ ကျပ်
ကျော်ဇင်ဦး+မနှင်းအေးလွင် = ၁၀၀၀၀ ကျပ်
မနှင်းအေးလွင်နှင့် သူငယ်ချင်းများ = ၁၀၀၀၀ ကျပ်
ချောချော = ၁၀၀၀၀ ကျပ်
ကြွက်နို့တွေအတွက် သဘာဝနည်းလမ်းကောင်းများ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ရေးသားသူ Lin Htet - ဧပြီ 27, 2013 at 4:27pm3Comments0Likes
ရေးသားသူ thantsinhtetaung - ဧပြီ 27, 2013 at 4:27pm 1 Comment0Likes
ရေးသားသူ Lin Htet - ဧပြီ 27, 2013 at 4:06pm 1 Comment0Likes
မလေးရှားရောက်မြန်မာများ 5.5.2013 တွင် သတိထားသွားလာကြပါရန်
ရေးသားသူ Lin Htet - ဧပြီ 27, 2013 at 4:00pm3Comments0Likes
ကျပ် ၁၅၀၀ တန် ဖုန်းဆင်းကတ်များ မှောင်ခိုဈေးကွက်တွင် ၀ယ်ယူနိုင်ပြီ
ရေးသားသူ ♥♪♥.Monica.♥♪♥ - ဧပြီ 27, 2013 at 3:12pm2Comments0Likes
ရုပ်ချောလို့ ပြည်နှင်ဒဏ်ခံရတဲ့ ဒူဘိုင်းနိုင်ငံသား
ရေးသားသူ ♥♪♥.Monica.♥♪♥ - ဧပြီ 27, 2013 at 3:08pm5Comments0Likes
ရေးသားသူ ♣တောသူမလေး♣ - ဧပြီ 27, 2013 at 10:10am0Comments0Likes
ရွှေကောင်းမူနဲ့ ရွှေတောင်းဆု (ဘေးမခ အေးမြတဲ့ရွှေ)
ရေးသားသူ ♣တောသူမလေး♣ - ဧပြီ 27, 2013 at 10:09am0Comments0Likes
ရေးသားသူ တတိုင်းမွှေး - ဧပြီ 27, 2013 at 1:30am3Comments0Likes
မောင့်အတွက် .....ကြာ
ရေးသားသူ ကြာဖြူနွယ် - ဧပြီ 26, 2013 at 10:41pm3Comments 1 Like
♫♫♫ အချစ်ဆိုတာ ♫♫♫
ရေးသားသူ အရိပ်မင်း - ဧပြီ 26, 2013 at 6:53pm2Comments 1 Like
ရေးသားသူ မိုးတိမ်(002) - ဧပြီ 26, 2013 at 4:47pm 1 Comment0Likes
ထမအကြိမ်မြောက် “ရွှေလက်ရာ ရသစုံစာစုများ” ခြေလှမ်းသစ်အတွက် လက်ရာရှင်များ၏ စာမူများ ရွေးချယ် ကြေငြာခြင်း
ရေးသားသူ ခိုင်လေး (ရွှေတောင်) - ဧပြီ 26, 2013 at 4:00pm6Comments 1 Like
အိမ်မက်ဆိုးတွေကနေ နိုးထပေးကြပါတော့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေရယ်
ရေးသားသူ ခိုင်လေး (ရွှေတောင်) - ဧပြီ 26, 2013 at 3:00pm 8 Comments4Likes
ရေးသားသူ ♣တောသူမလေး♣ - ဧပြီ 26, 2013 at 11:54am 1 Comment0Likes
ရေးသားသူ ♣တောသူမလေး♣ - ဧပြီ 26, 2013 at 11:53am 1 Comment0Likes
ရေးသားသူ ♣တောသူမလေး♣ - ဧပြီ 26, 2013 at 11:53am0Comments0Likes
ရေးသားသူ A Nge Lay - ဧပြီ 26, 2013 at 11:30am2Comments2Likes
ကျွန်တော် နှင့် သစ်ပင်
ရေးသားသူ နေကောင်းကင်နီ - ဧပြီ 26, 2013 at 11:29am2Comments2Likes
တင်ဆက်သူ ဆရာကြီး ၏ ကစားပွဲ. နောက်ဆုံး ဆွေးနွေးချက် ရေးသူ အောင်သူလှိုင် ဧပြီ 20. 305 Replies 45 Likes
တင်ဆက်သူ Leo Hero ၏ ဆွေးနွေးပွဲ. နောက်ဆုံး ဆွေးနွေးချက် ရေးသူ u ye aung ဧပြီ 7. 207 Replies9Likes
တင်ဆက်သူ အိသဇင်အောင် ၏ မိတ်ဆက်ပွဲ. နောက်ဆုံး ဆွေးနွေးချက် ရေးသူ စိုးသက်အောင် မတ် 29. 233 Replies 18 Likes
တင်ဆက်သူ ဆရာကြီး ၏ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ. နောက်ဆုံး ဆွေးနွေးချက် ရေးသူ susunwe မတ် 27. 25 Replies6Likes
တင်ဆက်သူ Leo Hero ၏ ဆွေးနွေးပွဲ. နောက်ဆုံး ဆွေးနွေးချက် ရေးသူ စန္ဒာစိုး မတ် 14. 31 Replies4Likes
ဒီနေရာမှာ လိုအပ်သည်များ ဆွေးနွေနိုင်ကြပါတယ်
တင်ဆက်သူ ဥယျာဉ်မှူးလေး ၏ ဆွေးနွေးပွဲ. နောက်ဆုံး ဆွေးနွေးချက် ရေးသူ မောင် မောင် မတ် 7. 26 Replies6Likes
တင်ဆက်သူ ဂျွန်ထိုက် ၏ ဆွေးနွေးပွဲ. နောက်ဆုံး ဆွေးနွေးချက် ရေးသူ kyawshein ဖေဇေါ်ဝါရီ 28. 1 Reply0Likes
လာကြကွ သောက်ကြမယ် ကောင်းကောင်း
ဖုန်းအသုံးပြုခနှင့် SMS အခမဲ့ သုံးနိုင်သည့် Aire Software
တင်ဆက်သူ ♪♥ ♪ ပါရမီ ♪♥ ♪ ၏ ဆွေးနွေးပွဲ. နောက်ဆုံး ဆွေးနွေးချက် ရေးသူ ညီမလေး ဖေဇေါ်ဝါရီ 1. 11 Replies6Likes
တင်ဆက်သူ လင်းလင်းထွဋ် ၏ ဆွေးနွေးပွဲ. နောက်ဆုံး ဆွေးနွေးချက် ရေးသူ တောသားရီး ဇန်န၀ါရီ 31. 1 Reply2Likes
ဆွေးနွေးပွဲ ကစားပွဲ စကားရည်လုပွဲ ဥာဏ်ရည်စမ်းပွဲ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ စာများတင်ရန် နေရာ *အခြားစာများ တင်ခွင့်မပြုပါ*
ကိုယ့်ပုံသူ့ ပုံ အလှစုံ
အငြိမ့်စင် ၊ အမှတ်တစ် ၊ အမှတ်နှစ် ၊ အမှတ်သုံး ၊ အမှတ်လေး ၊ အမှတ်ငါး
အပမ်းဖြေသူများ လှုပ်ရှားမှု အခြေအနေ
ရွှေအက်ဒမင်december boylay ပြန်လည်ရေးသားသည် က Lin Htet'ရေးသားတဲ့ စာတစ်ပုဒ် 'ကြွက်နို့တွေအတွက် သဘာဝနည်းလမ်းကောင်းများ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
2 မိနစ် အကြာက
kyipyamon, စန်ဒါလွင်, ဇာနည်ထွေး and7more joined ရွှေမြန်မာဥယျာဉ်
16 မိနစ် အကြာက
ကိုထွန်း၂၇၂ ပြန်လည်ရေးသားသည် က ♥♪♥.Monica.♥♪♥'ရေးသားတဲ့ စာတစ်ပုဒ် 'ရုပ်ချောလို့ ပြည်နှင်ဒဏ်ခံရတဲ့ ဒူဘိုင်းနိုင်ငံသား'
"သူပြီးရင်...နာ့ အလှည့်လား..သိဝူး.... "
24 မိနစ် အကြာက
lwinthein ပြန်လည်ရေးသားသည် က Lin Htet'ရေးသားတဲ့ စာတစ်ပုဒ် 'ကြွက်နို့တွေအတွက် သဘာဝနည်းလမ်းကောင်းများ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
25 မိနစ် အကြာက
ရွှေအက်ဒမင်december boylay ပြန်လည်ရေးသားသည် က Lin Htet'ရေးသားတဲ့ စာတစ်ပုဒ် 'မလေးရှားရောက်မြန်မာများ 5.5.2013 တွင် သတိထားသွားလာကြပါရန်'
28 မိနစ် အကြာက
may zaw ပြန်လည်ရေးသားသည် က Lin Htet'ရေးသားတဲ့ စာတစ်ပုဒ် 'မလေးရှားရောက်မြန်မာများ 5.5.2013 တွင် သတိထားသွားလာကြပါရန်'
"thankx4that."
34 မိနစ် အကြာက
Chatroom Adminkyawshein ပြန်လည်ရေးသားသည် က Lin Htet'ရေးသားတဲ့ စာတစ်ပုဒ် 'ကြွက်နို့တွေအတွက် သဘာဝနည်းလမ်းကောင်းများ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
"ကြွက်နို့ ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေအတွက်မျှဝေပေးလိုက်ပါမယ် ကျေးဇူးပါနော်......."
35 မိနစ် အကြာက
Lin Htet posted blog posts
37 မိနစ် အကြာက
Chatroom Adminkyawshein ပြန်လည်ရေးသားသည် က thantsinhtetaung'ရေးသားတဲ့ စာတစ်ပုဒ် '၁၅၀၀တန်ဆင်းကတ်များကိုသုံးသောင်းခွဲနှင့်ရောင်းသူများ'
38 မိနစ် အကြာက
thantsinhtetaung postedablog post
နိုင်င့တော်က24ရက်မှာ၁၅၀၀တန်ဖုန်းများကိုချပေးခဲ့ပါတယ်ထိုဖုန်းကတ်များကိုဖုန်းဆိုင်အချို့ နှင့်gameဆိုင်အချို့ မှ35000ဖြင့်ပြန်ရောင်းနေကြောင်းသိရပါတယ်သူငယ်ချင်းတို့ အမြန်ဆုံးစုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ရန်သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်See More
39 မိနစ် အကြာက
Chatroom Adminkyawshein ပြန်လည်ရေးသားသည် က Lin Htet'ရေးသားတဲ့ စာတစ်ပုဒ် 'မလေးရှားရောက်မြန်မာများ 5.5.2013 တွင် သတိထားသွားလာကြပါရန်'
"အင်းကြာကြာဝါးခြင်တဲ့ သွားဆိုတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရိုးတော့ကြည့် ရှောင်မှဖြစ်မယ်လေနော်......."
41 မိနစ် အကြာက
Chatroom Adminkyawshein ပြန်လည်ရေးသားသည် က ♥♪♥.Monica.♥♪♥'ရေးသားတဲ့ စာတစ်ပုဒ် 'ကျပ် ၁၅၀၀ တန် ဖုန်းဆင်းကတ်များ မှောင်ခိုဈေးကွက်တွင် ၀ယ်ယူနိုင်ပြီ'
45 မိနစ် အကြာက
ရွှေအက်ဒမင်december boylay ပြန်လည်ရေးသားသည် က Lin Htet'ရေးသားတဲ့ စာတစ်ပုဒ် 'COMMENTလှလှလေးတွေရေးကျမယ်............ ^_^'
47 မိနစ် အကြာက
ကောင်းကင်ကိုကို liked ထက်ကောင်းကင်'s blog post ဘဝအတွက် သိမှတ်စရာ (၁၂) ချက်
ngu wah ပြန်လည်ရေးသားသည် က ♥♪♥.Monica.♥♪♥'ရေးသားတဲ့ စာတစ်ပုဒ် 'ရုပ်ချောလို့ ပြည်နှင်ဒဏ်ခံရတဲ့ ဒူဘိုင်းနိုင်ငံသား'
"phit mha phit ya lay naw.... dar myo tway la` shi tal lar????]"
aye aye moe ပြန်လည်ရေးသားသည် က ♥♪♥.Monica.♥♪♥'ရေးသားတဲ့ စာတစ်ပုဒ် 'ရုပ်ချောလို့ ပြည်နှင်ဒဏ်ခံရတဲ့ ဒူဘိုင်းနိုင်ငံသား'
pacemkr91 (nann hsu hsu nyunt) ပြန်လည်ရေးသားသည် က ♥♪♥.Monica.♥♪♥'ရေးသားတဲ့ စာတစ်ပုဒ် 'ရုပ်ချောလို့ ပြည်နှင်ဒဏ်ခံရတဲ့ ဒူဘိုင်းနိုင်ငံသား'
ရွှေအက်ဒမင်december boylay ပြန်လည်ရေးသားသည် က ♥♪♥.Monica.♥♪♥'ရေးသားတဲ့ စာတစ်ပုဒ် 'ကျပ် ၁၅၀၀ တန် ဖုန်းဆင်းကတ်များ မှောင်ခိုဈေးကွက်တွင် ၀ယ်ယူနိုင်ပြီ'
အောင်မင်းသူ(ရဝေ) commented on ခိုင်လေး (ရွှေတောင်)'s group 'စာရေးသားသူတို့ပျော်မွေ့ရာ'
"ကြိုက်တယ်နော် အဖွဲကလေး တော်ပါပေတယ် ရည်ရွယ်ချက်ကလေး ကတော့ အားပေးပါတယ်"
♥♪♥.Monica.♥♪♥ posted blog posts
ရွှေမြန်မာဥယျာဉ်မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါ၏
တည်ထောင်သူ ဥယျာဉ်မှူးလေး created this Ning Network.
Goldenmyanmar Paradise likes
ဆိုဒ်တာဝန်ရှိအက်ဒမင်များ မင်းသျှင်(ဒုဥယျာဉ်မှူးလေး) DAVIDPHYO(စည်းကမ်းထိမ်းသိမ်းရေး) အာကာမိုးနိုင်(နည်းပညာအက်မင်) မေသက်ထားဝင်း(စည်းကမ်းထိမ်းသိမ်းရေး) ခိုင်လေး[ရွှေတောင်](အင်တာဗျူး+ဘဏ္ဍာရေးမှူး) ရဲဇော်ကို[မလေး](အင်တာဗျူးအက်ဒမင်) ကျော်ဇင်(ရွှေအက်ဒမင်)
ဘလော့ပို့စ်တာဝန်ခံများ ကျော်ရှိန်း(ချက်ဝန်းတာဝန်ခံ) ဒီဇင်ဘာဘွိုင်းလေး(အင်တာဗျူးအက်မင်) AyeMyatThu ကေသီအောင်ဆန်း
လူမှုရေးတာဝန်ခံအက်ဒမင်များ အလင်းငှက် HninHnin
မန်ဘာကြိုဆိုရေးတာဝန်ခံများ တောသူမလေး(ဒီဇိုင်း အက်ဒမင်) လမင်းကြွေ ThiThicho ရွှေရတီ
မွေးနေ့ဆုတောင်း တာဝန်ခံများ ဖြူစင်သောနှလုံးသား နှင်းစပယ်ဖြူ
ဥယျာဉ်အကြံပေး ချောချော(ဥယျာဉ်အကြံပေး) ကွန်ဆူးမား(ပြိုင်ပွဲရွေးခြယ်ရေး)
ဒီနေရာမှာ သင့်သူငယ်ချင်းတွေကို ဖိတ်ခေါ်၍ ရပါသည်
aye aye moe ရွှေမြန်မာဥယျာဉ်
aung cho htwe
17 ယောက် ၀င်ထားသည်
28 ယောက် ၀င်ထားသည်
72 ယောက် ၀င်ထားသည်
31 ယောက် ၀င်ထားသည်
44 ယောက် ၀င်ထားသည်
38 ယောက် ၀င်ထားသည်
25 ယောက် ၀င်ထားသည်
119 ယောက် ၀င်ထားသည်
auk GiveaGift
aungzawoo GiveaGift
eieikhine GiveaGift
heinsoe GiveaGift
hnin thazin GiveaGift
kokhaing GiveaGift
Kyaw Linn GiveaGift
laylwintnaytal GiveaGift
lonely man GiveaGift
loneyyadanar GiveaGift
minminhtun GiveaGift
peacock GiveaGift
Saw Ye Zayyar Oo GiveaGift
Tin Htut Aung GiveaGift
uthaungyee GiveaGift
winmyatcho GiveaGift
zarchilin GiveaGift
zaw zaw tun GiveaGift
zayartun GiveaGift
ထက်ပိုင် GiveaGift
ရွှေလက်ရာဆုရှင် anglehlaing လွမ်းဧကရီ shweba နေစိုး သံဇဉ်ဖြူဖြူ aye aye(မလေးငယ်) အဖြူရောင် ပီတိ(ပေကြီး)
ရွှေဘလော့ဂါများ ကာရံငယ် အောင်အောင်(မကစ) မိုးစက်မောင်မောင်(ရွှေညာသား) ချစ်ဦးမောင် စွန်ရဲ ကိုလင်းသုတ(ရွှေထီး) D-writer အိအိ moethiha စံပယ်ဖြူ(NantThinThinHmwe) mailmay နှင်းဆီရောင် တောသူမလေး တာယာ(ဂျလေဘီ်) သူရဿဝါ ဟမ်သော်ခေးရ် ရဲရင့်ရထာ မာစတာဘင်း ညချစ်သူ ညီလင်းနိုင် ကြည်ပြာရောင်နှလုံးသား အရိပ်မင်း mr myint KhantZawPhyoe anglehlaing မောင်သုည monicakyaw ကိုကိုသုစံ ကကြီး sailin ရဲထွဋ် goodbye Tide